China Vemhuri Chikamu Chikamu vagadziri uye vanotengesa | KAIHUA
● Outdoor Series
● Indoor Series
● Vana Series
Imba kupatsanura ine yegore rekugadzira inokwana mazana matatu kusvika mazana mashanu emazana ekugadzika, nekukurumidza nguva yekuendesa uye mutengo wemakwikwi. Mazhinji acho anoumbirwa tafura nechigaro, bhokisi rekuchengetera, kabhineti, mbichana mbichana, matoyi evana etc. Nekuziva kudzora nguva yekutenderera, kudzikisa huremu uye maitiro ekugadzira zvigadzirwa zvakanaka uye zvine simba, zvigadzirwa zvedu zvinogona kuunza kukosha kukuru kune vatengi vedu.
Yakakwira Hunhu (Mould & Chigadzirwa Hunhu)
On-nguva dhirivahari (Kubvumidzwa Sample & Mould Dhirivhari)
Kudzora Kwemutengo (Zvakananga & zvisina kunangana Mari)
Yakanakisa Sevhisi (Sevhisi kune Mutengi, Mushandi & Mutengesi)
Sisitimu- U8 ERP manejimendi system
Maitiro — Project Injiniya Kudzora
Gwaro — ISO9001-2008
Kumisikidza -Kuongorora Performance Performance
With wepagore muforoma kugadzirwa vanokwanisa kupfuura 1,600 rinovira, vanopfuura 650 vashandi, uye kufukidza imwe nzvimbo 42,000 mativi metres, Huangyan nechigadziko rakakamurwa muzvikamu zvina zvakasiyana izvo zvinosanganisira Logistic kupatsanurwa, Medical weboka, Automotive weboka, Household weboka uye Home mudziyo kupatsanurwa.
Ine pagore chakuvhuvhu kugadzirwa chinzvimbo chinopfuura 900 seti, vashandi vanopfuura mazana mashanu, uye ichifukidza nzvimbo inosvika zviuru mazana matatu emamirimita, Sanmen base ine hunyanzvi mukugadzira mota mafomu ekunze system, yemukati system uye kutonhora system.
Zvikwata zvekugadzira zvine machining emusangano, musangano wekusangana, kuona musangano, polish musangano uye jekiseni musangano.Pakati peboka rese rekugadzira, pane vanopfuura makumi matatu muzana mahunyanzvi shom akapihwa seapakati oranogadzira ma technician Uyezve, mahunyanzvi ane makore anopfuura gumi ruzivo anotora kumusoro kupfuura makumi maviri muzana.
Machining timu: ine yakashata machining, semi-chaiyo machining, chaiyo machining, 5-axis machining centre, chirongwa uye mamwe mapoka. Yese musangano ndeyekufukidza nemhepo inogadzirisa. Kugadziriswa kwese kuri pasi pekutonga kweE ERP.
Dare remusangano: vese vagadziri veforoma vanogona kutarisa mukugadzira izvo zvavanoziva. Ivhareji ruzivo rwemuumbi mugadziri anopfuura makore makumi maviri.
Kutarisa timu: Iine 100T-500T muchina wekutarisa, ivo vanoshanda vanonzwisisa zvizere chirevo chekuona, maitiro ekudzora kuona.
Makorari timu: ine yakadzama kubatana kune yegungano timu, ivo vanoziva maitiro ekukwirisa izvo zvinodiwa zvekupukuta zvemhando dzakasiyana dzezvigadzirwa, kunyangwe girazi polish level.
Jekiseni timu: isu tine jekiseni michina inowanikwa kubva ku120T-3300T, iine robhoti, magineti yekunamatira uye hydraulic clamping. Vafambisi vanogona kuyedza mumamiriro ezvinhu ari padyo nemamiriro chaiwo ekugadzira uye akatodarika chaiwo mamiriro ekugadzira, kuti mutengi wedu ave nezvakanaka mareferensi.
Pashure: Imba Yekushandisa Kumba
Zvadaro: YeMotokari Chikamu
Car musu muforoma
YeMota chiridzwa pani muforoma
Mota bhamba muforoma
Mota kumashure vhiri muforoma